Laga Xaafoo-Laga Daadhii: 'Dhimmi isaa namoota buqqisuu osoo hintaane, seera kabachiisuudha' - BBC News Afaan Oromoo
Bulchiinsa Magaaalaa Laga Xafoo Laga Daadhii keessatti paarkiiwwan magariisaa, lageen qarqara misoomsuufi invastimantii biraa lafti akka ooluuf jecha pilaanii magaalattiin karoorfaman irratti manneen seeraan ala ijaaraman jedhaman diigamaa jiru.
Jiraattonni naannichaa garuu kun gatii nu baasisaa jira jedhu.
Qote bulaa irraa lafa bitannee mana irratti ijaarrannee jiraachuu yeroo jalqabnutti naannoon sun oyiruu qonnaadhaan kan marfameefi bu'uuraalee misoomaa akka hin qabne kan dubbatan warreen manni jalaa diigame keessaa tokko kan ta'e Obbo Anuwaar Ahimad.
Mana isaatiif kaartaa argachuuf yaalee milkaa'uu baatus, "bishaaniifi ibsaan galeefii, lakkoofsi manaa nuuf kennamee gibira lafaa itti kaffalaa jirra," jedha Obbo Anuwaar.
Manneen seeran ala ijaaraman jedhaman kana diiguun Kibxata kan jalqabame yommuu ta'u, manneen kuma 10 ol ta'an diigamanii akka pilaanii magaalichaa irra jiruun paarkiiwwan/bakkawwan magariisaa ta'u jechuudhaan Kantiibaan Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii sabaa himaalee biyya keessaaf ibsanii tura.
Hogganaan Biiroo Bulchiinsaafi Itti-Fayyadama Lafaa Oromiyaa Dr. Mikeessaa Miidhagaa dhimma kana irratti BBC'tti akka himanitti murteen seera hordufuun kan fudhatameedha jedhaniiru.
Dimmi isaa seera dagatame ol-kaasnee seera kabachiisuudha
Akka Hooganaan kun jedhanitti, dimmi isaa seera dagatame ol-kaasnee seera kabachiisuudha. Naannoon Laga Xaafoo amma diigame bowwaafi allayyaadha, Lagni Aqaaqiis achii ka'a. Kanaaf namoonni kana warra qubatedha.
''murteen seera hordufuun kan fudhatameedha''
Kanaaf seerri ni jira kan jedhan Dr. Milkeessaan, ALI Amajji 2005 dura ijaaraman pilaanii magaalaatiin wal simatan kaartaa akka argatan godhama. Kan fuula lafa mana jireenyaatiin ala ijaaraman ammoo ALI bara 2005 duras yaa ta'u isaan booda, ni diigama jedha seerri.
"Kanaaf, waanti godhamaa jiru seeruma bu'uureffateetuma ta'aa jirudha malee akka namoonni tokko bifa siyaasaa, bifa maaloo godhan kana miti."
Kan Laga Xaafoo-Laga Daadhii maaliif adda ta'e?
Darbee kan Laga Xaafoo maaliif dubbii ta'e jedhamee gaafatamuu qaba kan jedhan Hoogganaan Bulchiinsaafi Itti-Fayyadama Lafaa Oromiyaa kun, Dilbata darbe irraa kaasee hanga Roobiitti Mattuu keessatti manneen 450 olitu diigame.
Shaashamannee irratti kanaan dura diigameera. Adaamaa keessattis diigameera jechuun akka fakkeenyaatti kaasu.
Isa akkasiif ammoo siyaasni maaliif hin odeeffamne jechuunis tarkaanfiin kan Laga Xaafoo Laga Daadhii waan adda taasisu akka hin jiraanne dubbatan.
"Haaluma walfakkaatuun itti fufa seeratti galchuun. Kan Laga Xaafoo Kun maalii akkas ta'e jennee yoo ilaalle hiyyeessa miti kan ijaarrate. Warroota qabeenya qabanidha. Warra caasaa mootummaa keessa jiraachuu danda'anidha," jedhan.
Gaaffii yeroo manneen kun hunduu ijaaraman maaliif akka callifameefi qaamoleen mootummaa kana keessatti hirmaatan jiruu kan jedhuufis, "Qaamoleen mootummaa kana keessatti qooda fudhatan ni jiru.
Caasaan mootummaa kan harka keessaa qabuufi seeratti dhiyeessine jira."
Akka Hooganichi jedhanitti warri keessatti gahee qabanis ta'e warri yeroo kun ta'u taa'anii ilaalan irratti tarkaanfiin fudhatameera. Amma adeemsarra jirra waan ta'eef dhimmi isaa qulqullaa'aadhuma deema.
Akka seeraatti lafti magaalaa karaa lama qofa daarbe
Akka seeraatti lafti magaalaa karaa lama qofa darba. Inni tokko ramaddii, kan biraan ammoo caali-baasiidha. Karaa sana lamaaniin ala namni ijaarsa seeraan alaa namni gaggeesse, waggaa torbaa hanga waggaa 14 itti murtaa'a.
Qarshiidhaan ammoo kuma 40 kaasee hanga kuma 200 ti itti murtaa'a jechuun ibsan Dr. Milkeessaan.
"Akka seeraatti namni kana raawwate ni hidhama jedha. Garuu nuti nama hanga kana akkamittiin hiina jenneetuma dhiifne," jedhu.